''ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးထဲ စကားေျပာေနဟန္ေတြ႕လိုက္ရသျဖင့္ ကင္မရာနဲ႔ရိုက္လိုက္ေသာအခါ ေဇာ္ဂ်ီတစ္ပါးအံ့ၾသစြာေတြ႕လိုက္ရတဲ့ ထူးျခားေသာ ခမုံ ဆရာေတာ္ႀကီး'' - Myitter
January 18, 2020 Myitter ျပည္တြြင္းသတင္း 0
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရန္ကုန္တိုင္း သာေကတၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ဒကာအရင္း တစ္ေယာက္ေနအိမ္ကိုတစ္ညတာ ႂကြေရာက္သတင္းသုံးစဥ္အခါက …
ထိုစဥ္က တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဇိနမာရ္ေအာင္ေစတီႀကီးတည္ေနတဲ့ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္ …
ခုတင္ သာေကတေရာက္လာတာ ဘုရားမွာဆိုင္းတီးေနတာကို ဘယ္လိုမ်ား သိပါလိမ့္ ျပီးေတာ့ စိန္ေအာင္မင္းနဲ႕လည္း စကားေျပာမလို႔တဲ့ …
စဥ္စားခ်ိန္မရခင္ပဲ ေျခလွမ္းျမန္တဲ့ဆရာေတာ့္ကို အမီလိုက္ရင္း ဇိနမာရ္ေအာင္ဘုရားကို ေရာက္သြားၾကပါတယ္ …
ေအး ဘယ္ႏွယ့္လည္း ဥၾသေရႊေကာ ေနေကာင္းရဲ႕လား … မနက္ ၅ နာရီ မင္းအိမ္ကို ငါႂကြလာမယ္….ဥၾသေရႊကို ၾကာဆံေၾကာ္ကပ္ဖို႔ အသင့္ျပင္ထားလို႔ေျပာလိုက္ ၾကားလား …
ကဲကဲ ငါျပန္ႂကြေတာ့မယ္ မင္းလည္း ရတုဆက္ဆိုေတာ့ …
မနက္ ၅ နာရီအေရာက္ စိန္ေအာင္မင္းအိမ္ကိုႂကြဖို႔ျခင္ေထာင္ထဲမွာက်ိန္းစက္ေနတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးကိုအခ်ိန္မွီႏႈိးရမယ့္အေတြးနဲ႔ မၾကာခဏ နာရီထၾကည့္ေနရင္း ဘယ္လိုအိပ္ေပ်ာ္သြားမွန္းမသိတဲ့ …
အဘဦးေကာင္းခန္႔ဟာ ရုတ္တရက္နိုးလာလို႔ နာရီကိုလွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ မနက္ ၆ နာရီထိုးေနပါျပီ …
ဒုကၡပါပဲငါလည္းဘယ္လိုအိပ္ေပ်ာ္သြား မွန္းမသိဘူးဆရာေတာ္ႀကီးလည္းခုထိအိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္းမို႔ မႏႈိးရဲဘူး ခုမွ ဂြက်ျပီ …
ဦးေကာင္းခန္႔တစ္ေယာက္ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိပဲ အႀကံအိုက္ေနရင္း တစ္စုံတစ္ခုကိုသတိရလိုက္မိပါတယ္ ဆရာေတာ္ႀကီးဟာ သူ႔ကတိကို ဘယ္ေတာ့မွမပ်က္ဖူးဘူး ….
မျဖစ္ေသးပါဘူး အိမ္အျမန္ျပန္ၾကည့္ဦးမွဆိုပီး အိမ္ကိုအျမန္ျပန္လာ ဆရာေတာ္အိပ္တဲ့ အိပ္ယာကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ …
ဒကာေကာင္းႏွယ္ တိုက္ေရွ႕ေရာက္ပါရက္နဲ႔ ဘာလို႔ မဝင္လာတာလည္း ကဲ ေရာ့ေရာ့ ဒကာေကာင္းစားဖို႔က်ဳပ္ၾကာဆံေၾကာ္ယူလာခဲ့တယ္ …..
ကုသိုလ္သဒၶါပြါးမ်ားနိုင္ရန္အတြက္ ဓါတ္ပုံကိုကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ … အလ်ဥ္းသင့္တဲ့ခါ အျခားထူးျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံေရးသား တင္ျပေပးပါ့မယ္ …..။
မြန်မာနိုင်ငံ ပဋိပတ္တိသမိုင်းတစ်လျောက် ထူးခြားလှတဲ့သံဃာတော်များ လူပုဂ္ဂိုလ်များအမြောက်အများရှိကြတဲ့ ထဲမှာ ဖိနပ်မစီး ထီးမဆောင်း ကျောင်း ၁၂ ကျောင်းကိုခေါင်းလောင်းထိုးလှုခဲ့တဲ့ #ခမုံဆရာတော်ကြီး လည်းတစ်ပါး အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် …
ဆရာတော်ကြီးဟာ အရပ်မြင့်မြင့် အသားဖြူ ဖြူ ကြည်လင်သောအသားအရည် ခန့်ညားတဲ့ ဥပဓိရုပ်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်း တက်ကြွရွှင်လန်းစွာ ပရိတ်သတ်နဲ့ တရင်းတနှီးနေလေ့ရှိပါတယ် …
ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဓမ္မစွမ်းအား လောကီစွမ်းအားမည်မျှထိ ရှိတယ်ဆိုတာကို သာမန်လူတို့ ခန့်မှန်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကာလတစ်ခုထိ တပည့်သာဝကအဖြစ် အတူရှိနေခဲ့ဖူးတဲ့အဘဦးကောင်းခန့်ရဲ့အတွေ့အကြုံများအရ ဆရာတော်ကြီးဟာ ထူးခြားသောဝိသေသရှိတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာ မြေကြီးလက်ခတ် မလွဲသိရှိရပါတယ် …
လွန်ခဲ့သော နှစ် ၃၀ ကျော်ခန့် ရန်ကုန်တိုင်း သာကေတမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒကာအရင်း တစ်ယောက်နေအိမ်ကိုတစ်ညတာ ကြွရောက်သတင်းသုံးစဉ်အခါက …ထိုစဉ်က တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဇိနမာရ်အောင်စေတီကြီးတည်နေတဲ့ အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ် …
ညဦးပိုင်း တရားဟောလို့အပြီး … ဒကာကောင်းရေလာဗျာ ဇိနမာရ်အောင်ဘုရားသွားကြရအောင် ဆိုင်းလည်းနားထောင်ရင်း စိန်အောင်မင်းနဲ့လည်း စကားပြောရင်းပေါ့ …
ခုတင် သာကေတရောက်လာတာ ဘုရားမှာဆိုင်းတီးနေတာကို ဘယ်လိုများ သိပါလိမ့် ပြီးတော့ စိန်အောင်မင်းနဲ့လည်း စကားပြောမလို့တဲ့ … စဉ်စားချိန်မရခင်ပဲ ခြေလှမ်းမြန်တဲ့ဆရာတော့်ကို အမီလိုက်ရင်း ဇိနမာရ်အောင်ဘုရားကို ရောက်သွားကြပါတယ် …
စေတီတော်ဝင်းတစ်ခုလုံး လူပရိတ်သတ်တွေအပြင်ရဟန်းသာမဏေတွေနဲ့ပါ ကြိတ်ကြိတ်တိုးစည်ကားနေပြီး ဘုရားဝင်းတစ်နေရာမှာတော့ မြစည်သူဆိုင်းအဖွဲ့နဲ့အတူ ဝဏ္ဏကျော်ထင်စိန်အောင်မင်းကလည်းရတုပိုဒ်စုံသီဆိုနေတာတွေ့ရပါတယ် …
ဆရာတော်ကြီးဟာ ပရိတ်အစွန်မှာရပ်နေရင်း အနီးနားက ဘုရားလုံခြုံရေးတစ်ယောက်ကို လှမ်းခေါ်လိုက်ပီး ဟေ့ … ဟိုစင်ပေါ်မှာ ရတုဆိုနေတဲ့ စိန်အောင်မင်းကိုသွားခေါ်ချည် ဒီမှာခမုံဆရာတော်ရောက်နေတယ်အခုလာခဲ့လို့ သွားပြောလိုက် …
သံနေသံထားနဲ့ ရတုသီဆိုနေတဲ့ စိန်အောင်မင်းဟာသီဆိုလက်စကို ရုတ်တရက်ရပ်တန့်လိုက်ပီး ပရိတ်သတ်ကို ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းပေးဖို့ တောင်းပန်ရင်း ဆရာတော်ကြီးရှိရာကို ပျာပျာသလဲ ရောက်လာပါတယ်…..
ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခြေအစုံကိုဦးတိုက်ရှိခိုးနေတာကိုကြည့်ပီး အနီးနားက ပရိတ်သတ်တွေလည်းခမုံဆရာတော်ကြီးမှန်း ခုမှသိရလို့ အံ့သြစွာနဲ့ဝိုင်းအုံလာပြီး ရှိခိုးကန်တော့ကြပါတယ် …
အေး ဘယ်နှယ့်လည်း ဥသြရွှေကော နေကောင်းရဲ့လား … မနက် ၅ နာရီ မင်းအိမ်ကို ငါကြွလာမယ်….ဥသြရွှေကို ကြာဆံကြော်ကပ်ဖို့ အသင့်ပြင်ထားလို့ပြောလိုက် ကြားလား … ကဲကဲ ငါပြန်ကြွတော့မယ် မင်းလည်း ရတုဆက်ဆိုတော့ …
မနက် ၅ နာရီအရောက် စိန်အောင်မင်းအိမ်ကိုကြွဖို့ခြင်ထောင်ထဲမှာကျိန်းစက်နေတဲ့ ဆရာတော်ကြီးကိုအချိန်မှီနှိုးရမယ့်အတွေးနဲ့ မကြာခဏ နာရီထကြည့်နေရင်း ဘယ်လိုအိပ်ပျော်သွားမှန်းမသိတဲ့ … အဘဦးကောင်းခန့်ဟာ ရုတ်တရက်နိုးလာလို့ နာရီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၆ နာရီထိုးနေပါပြီ …
ဒုက္ခပါပဲငါလည်းဘယ်လိုအိပ်ပျော်သွား မှန်းမသိဘူးဆရာတော်ကြီးလည်းခုထိအိပ်ပျော်နေတုန်းမို့ မနှိုးရဲဘူး ခုမှ ဂွကျပြီ … ဦးကောင်းခန့်တစ်ယောက် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲ အကြံအိုက်နေရင်း တစ်စုံတစ်ခုကိုသတိရလိုက်မိပါတယ် ဆရာတော်ကြီးဟာ သူ့ကတိကို ဘယ်တော့မှမပျက်ဖူးဘူး ….
ဒါဆိုတန်တော့ …ဦးကောင်းခန့်ဟာ ဆရာတော်ကြီးကျိန်းစက်နေတာ ကို သေချာကြည့်ပီးတဲ့ချိန်မှာပဲ စက်ဘီးအမြန်စီးပီးဘဘစိန်အောင်မင်းတို့တိုက်ကို ရောက်သွားပါတယ်…
အိမ်ထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဘုရားခန်းမှာ ထိုင်ပြီး ကြာဆံကြော်ဘုဉ်းပေးနေတဲ့ ဆရာတော်ကြီးကိုထူးဆန်းအံ့သြစွာတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ် … အိမ်မှာလည်း ကျိန်းစက်နေပါလျက် ဒီကို ဘယ်လိုရောက်နေပါလိမ့် …
မဖြစ်သေးပါဘူး အိမ်အမြန်ပြန်ကြည့်ဦးမှဆိုပီး အိမ်ကိုအမြန်ပြန်လာ ဆရာတော်အိပ်တဲ့ အိပ်ယာကိုကြည့်လိုက်တော့ …ဒကာကောင်းနှယ် တိုက်ရှေ့ရောက်ပါရက်နဲ့ ဘာလို့ မဝင်လာတာလည်း ကဲ ရော့ရော့ ဒကာကောင်းစားဖို့ကျုပ်ကြာဆံကြော်ယူလာခဲ့တယ် …..
အဆာပြေလေးစားလိုက်ပါဦးဆိုပီး ထိုင်ခုံပေါ်ကနေ ပြုံးရွှင်စွာ ဆီးကြိုပြောလိုက်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးကိုကြည့်ပီး ဦးကောင်းခန့်ဟာ ကြက်သီးမွေးညှင်းထမတတ် ကြည်ညိုစွာနဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခြေအစုံကို ဦးချ ကန်တော့လိုက်ပါတော့တယ် …
အလောင်းတော်ကဿပမှာသိမ်သမုတ်တော ်မူပြီးတောတန်းလေးအတိုင်း ပြန်ကြွလာတဲ့ ခမုံဆရာတော်ကြီးဟာ သပိတ်ကိုလွယ် ထန်းရွက်ယပ်နဲ့မို့အလွန်ကို သပ္ပာယ်ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်…..
လမ်းခွတ်လပ်တစ်နေရာအရောက်မှာ ရုတ်တရက်ရပ်တန့်တော်မူလိုက်ပီး တစ်ပါးထဲစကားပြောနေဟန်တွေ့လိုက်ရတဲ့မြန်မာစာဌာနကထိကဦးမျိုးမြင့်ဟာထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းမို့ အသင့်ပါလာတဲ့ ကင်မရာနဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးလိုက်ပါတယ် …
ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်လို့ဓါတ်ပုံဆေးကူးကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ ရပ်တော်မူနေတဲ့ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာ ဇော်ဂျီတစ်ပါးက နာနတ်သီးတစ်လုံးကပ်လှုနေတဲ့ပုံကို အံ့သြစွာတွေ့လိုက်ရပါတယ် …
ဆရာတော်ကြီးကိုလျောက်ထားမေးမြန်းကြည့်တဲ့ခါ ဇော်ဂျီဟာအတိတ်ဘဝက ဆရာတော်စပ်ခဲ့ဖူးကြောင်းဟိမဝန္တာမှာ နေထိုင်ပီး ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တရားကိုနာကြားရတဲ့အတွက် ကြည်ညိုစွာဖြင့်ခုလိုသစ်သီးလာရောက်ကပ်လှုတာဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားတော်မူခဲ့ပါတယ် …
ကုသိုလ်သဒ္ဓါပွါးများနိုင်ရန်အတွက် ဓါတ်ပုံကိုကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် … အလျဉ်းသင့်တဲ့ခါ အခြားထူးခြားသော အဖြစ်အပျက်များကိုလည်း ထပ်မံရေးသား တင်ပြပေးပါ့မယ် …..။
”ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္နိုင္ငံၾကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၃၃ခုက ဘာေတြလဲ”
”သစ္္တစ္ေခ်ာင္းကို ဘယ္ေစ်းေရာင္းရမလဲ တြက္နည္း၊ ေရဂါလံ တြက္နည္း ႏွင္႔ ေျမဧက တြက္နည္္းမ်ား”